Wimhyɛn Bi Anya Akwanhyia Wɔ Cuba, Na Abusua Bi a Emufo Yɛ Adansefo Awu | JW.ORG Nsɛm a Ɛrekɔ So
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Armenian Azerbaijani Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hungarian Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lingala Lithuanian Malagasy Myanmar Norwegian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Yoruba
Wimhyɛn Bi Anya Akwanhyia Wɔ Cuba, Na Abusua Bi a Emufo Yɛ Adansefo Awu
Fida, May 18, 2018 no, wimhyɛn bi a wɔfrɛ no Boeing 737 tui wɔ Havana a ɛwɔ Cuba. Etui no, ankyɛ koraa na ɛkɔhwee ase. Nnipa 113 a na wɔwom no, wɔn mu baako pɛ na onyaa ne ti didii mu. Akwanhyia a ani yɛ nyan sei de, ebi sii ɔman no mu akyɛ pa ara.
Awerɛhosɛm ne sɛ, nnipa a wowuwui no, na Yehowa Adansefo mmiɛnsa ka ho. (agya bi ne ne yere ne wɔn ba a wadi mfe 22). Ná asafo a wɔwom wɔ Cuba no dɔ wɔn pa ara na na wɔmfa wɔn som nni agorɔ. Wɔyɛɛ wɔn ayi Memeneda, May 26, 2018.
Asafo mu mpanyimfo rehyɛ anuanom ne abusuafo a ade atɔ wɔn ani no nkuran, na wɔde awerɛkyekyesɛm a ɛwɔ Bible mu reboa wɔn. Atumfoɔ a wɔwɔ hɔ nso ayi wɔn yam de honam fam mmoa ama wɔn. Yɛwɔ awerɛhyem sɛ Yehowa bɛkɔ so ‘akyekye wɔn a wodi awerɛhow nyinaa werɛ’ wɔ mmere a emu yɛ den yi mu.​—Yesaia 61:1, 2.
Wo ho nipa bi awu?